राउटेलाई अबको जनगणनामा समेटिने -
राउटेको यकिन सङ्ख्या कति छ ? जनगणना अद्यावधिक गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग यसको उत्तर छैन । यही प्रश्न राउटे अगुवालाई सोध्दा पनि सिधा जवाफ आउँदैन । ‘टाउको गन्न हुन्न’ भन्ने मान्यताका कारण राउटे समुदाय अहिलेसम्म राष्ट्रिय जनगणनामा अटाउन सकेको छैन ।
सरकारले १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तयारी शुरु गरिसकेको छ । प्रत्येक १०/१० वर्षमा अद्यावधिक गरिने जनगणनाको यही माघदेखि ‘नमूना गणना’ शुरु हुँदैछ । तर, नेपालको एकमात्र फिरन्ते र लोपोन्मुख जाति राउटेको सङ्ख्या र यसका अन्य विवरणहरु राज्यको आधिकारिक तथ्याङ्कमा समावेश हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ ।
यो समुदायको आधिकारिक तथ्याङ्क नहुँदा विभिन्न अनौपचारिक स्रोतलाई आधार मानेर सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु राउटे समुदायमा परिचालित भएको पाइन्छ । कर्णालीको प्रदेश राजधानी सुर्खेतस्थित सरोकारवालाहरुले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई जनगणनामा राउटे समुदायलाई अटाउन सुझाव दिएका छन् । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले आफ्नो सङ्ख्या गन्न नदिने राउटे समुदायको प्रवृत्ति भए पनि जनगणनामा समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “कर्णालीमा मात्रै रहेका राउटेहरुको सङ्ख्या, उनीहरुको पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतको अवस्थाबारे स्पष्ट तथ्याङ्क आउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो – “राज्यले राउटे समुदायको वास्तविक सूचना सङ्कलन गर्नुपर्दछ । अब पनि यो समुदायलाई छुटाउँदा जनगणना अपुरो हुनेछ ।”
विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीद्वारा लिखित ‘दोसाधका राउटे’ पुस्तकमा विभिन्न अध्येताहरुका बेग्लाबेग्लै तथ्याङ्क पाइन्छ । कार्कीले २०३९ सालमा आफ्नो अध्ययनबाट १९० सङ्ख्या रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्टले सन् १९७६ मा २००, डा. नन्दबहादुर सिंहले सन् १९९७ मा १३०, केशरसिंह माझीले ३००, पत्रकार हरिहरसिंह राठौर १६४ र विष्णुऋषि पाण्डेले ३५० सङ्ख्या उल्लेख गर्नुभएको भेटिन्छ । राउटे उत्थान प्रतिष्ठान नेपालका अनुसार हाल ४६ परिवार र १५१ जना सदस्य छन् । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानमा सूचीकृत ५८ जनजाति मध्येमा राउटे पनि पर्दछ ।
राउटेहरु आफूलाई ‘जङ्गलका राजा’ ठान्छन् । ठकुरी वंशका रास्कोटी, कल्याल र सोवंशी थर छन् । नामका पछाडि सबैले ‘शाही’ भन्ने गर्दछन् । बोल्ने बेग्लै भाषा छ, जसलाई ‘खाम्सी’ भनिन्छ । यसको लिपि भेटिँदैन । धर्म–संस्कृति हिन्दु सम्प्रदायसँग मेल खान्छ । देवीदेवताका रुपमा दारेमष्टोको पूजा गर्छन् । अरु चाडवाडभन्दा साउने सङ्क्रान्ति, बडादशैं र माघे सङ्क्रान्ति धुमधामका साथ मनाउ“छन् । महिलाहरुले घलेक, चोलो, फरिया लगाउ“छन् भने पुरुषहरुले गादो (सेतो बाक्लो कपडा), कम्मरमा पटुका बाँध्छन् । नगद रुपैयाँ, पैसा राख्ने थैली घाँटीबाट कम्मरसम्म छड्के पारेर भिरेका हुन्छन् । टाउकामा बाक्लो फेटा बाधेका हुन्छन् ।
मुखिया नै समुदायको नेता हुन् । हितविपरीत काम गर्ने, आफ्ना जनताको जीविकाप्रति चासो नदिनेलाई पदबाट हटाउँछन् । पहिले मुखिया एकजना मात्र हुन्थे । पछिल्ला वर्ष तीन वटै जातिका बेग्लाबेग्लै मुखिया राखिएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५र/६६ देखि लोपोन्मुख मासिक भत्ता दिन थालेको छ । प्रतिव्यक्ति ५०० रुपैयाँबाट शुरु भएको भत्ता रकम अहिले ३ हजार पुर्याइएको छ ।